Farmaajo oo looga fadhiyo inuu go’aan ka gaaro takri falkan ay dowladdii Xasan ka sameysay Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Farmaajo oo looga fadhiyo inuu go’aan ka gaaro takri falkan ay dowladdii...
Farmaajo oo looga fadhiyo inuu go’aan ka gaaro takri falkan ay dowladdii Xasan ka sameysay Muqdisho
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Iyo Ra’isulwaasaraha xukuumadda Xasan Cali Kheyre ayaa asbuuca soo socdo la filayaa inay ku dhawaaqaan golohooda wasiirada oo la filayo inay kasoo muuqdaan shaqsiyaad ka tirsanaan jiray xukuumadii uu Farmaajo Ra’isulwasaarha u ahaa .
Haddaba shacabka Muqdisho ayaa madaxweynaha iyo xukuumadda cusub ka filayo inay go’aan taariikhi ah ka qaataan qaladadaad iyo ku takrifal ay dowladdii Xasan Shiikh Maxamuud ku sameysay dhul ay laheyd dowladda iyo mid hanta guud ah.
Dowladdii Xasan Shiikh Maxamuud ayaa lagu eedeeyey inay shaqsiyaad ku wareejiyey dhul badan oo ay leedahay dowladda kana mid ah hantida guud ee qaranka taasoo aheyd caqabadii ugu weyneyd ee qabsaday dowladdii Xasan Shiikh Maxamuud, sidoo kalana waxay dhul guud ku wareejisay shirkadda si gaar ah loo leeyahay.
Madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ballan qaaday inay dowladiisa sixi doontaa qalaladaadkii ay gashay dowladii ka horeysay sidoo kalana wuxuu ballan qaaday in hantida qaranka aan la dhici doonin .
Iyadoo hadalkaas la raacayo shacabka Muqdisho oo ay caasimadda Online la dhex qaatay makarafoonka ayaa dowladda cusub ka codsaday in dib loogu soo celiyo gacanta dowladda dulalkii ay sida sharciga darada ah u maamushay dowladdii Xasan Shiikh Maxamuud.
Dhulkii ugu dambeeyey ee dowladda Xasan ay shaqsiyaad ku wareejisay ayaa waxa uu ku yaalaa agagaarka Isygoyska Ex Control Afgooye waxaana tallabadada shacabakii daganaa looga saaray ka dambeeyey wasiirkii Arrimaha gudaha dowladdii Xasan Cabdiraxmaan Odawaa oo dhulkaas ku amray Gobolka Banaadir inay u saxiixdo shaqsiyaad isugu jiro siyaasiyiin iyo dad wasiirka ay qaraabo yihiin.
Dhulkaas ayaa la rabay in la cabiro marka uu Xasan xilka kusoo noqdo balse midaas ma dhicin waxaana hadda meel fashil ah marayo arrintii uu Odawaa damacsanaa maadaama Xasan uu meesha ka baxay waxaana dowladda cusub laga rajeenayaa inay dhulkaas kusoo celiso gacanta dowladda lana kansalo Documentigii Shaqsiyaadka loogu saxiixay.
Haddi ay dowladda Farmaajo ku guuleysato inay dib usoo celiso xantidii qarnaka laga boobay waxay midaas caddeyn doontaa inuu Farmaajo ka dhabeeyey hadalkiisa ahaa inuu ka shaqeyn doono horumarka iyo Cadaaladda.